जानि राख्नुस : यस कारण महिलाले ह’ स्त मै’ थुन गरेको राम्रो ! यसरि गर्दा बढी आनन्द मिल्छ । – Ujyaalo Patrika
त्यसकारण महिलाले लत लाग्ने गरी तथा आवश्यक भन्दा बढी गर्नु हानिकारक मानिन्छ । यसका साथै प्रवेश गराइने वस्तु सफासुग्घर हुन आवश्यक छ । यदि ती वस्तु साफ छैनन् भने विभिन्न सं ,क्र मण देखापर्न सक्छन् । त्यसकारण महिलाले कुनै कुरा प’ साएर गर्दा केही ध्यान दिनुआवश्यक छ । यदि बजारमा पाइने त्यस्ता साधनका कारण महिलालाई लत लाग्न सक्छ र वैवाहिक जीवनमा चरम यौ७ ,न स न्तुष्टि प्राप्तिका लागि पुनः यसकै सहारा लिन पर्ने हुन सक्छ ।
Previous लामो समय यौ’ न, स’ म्पर्क नगरे शरीरमा आउँछ यस्तो परिवर्तन
Next शा’ रीरिक स,म्पर्क लामो समयसम्म कसरी राख्ने ? : जानीराखौ